Hetsika ara-panatanjahantena 10 be mpijery indrindra hatramin'izay 2022 - Victor Mochere
Ankoatra ny hetsika tsy mbola nisy toy izany, tsy misy na inona na inona mampiray an'izao tontolo izao ho mpijery toy ny fanatanjahantena. Raha tsy afaka mijoro amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena lehibe indrindra eran-tany ianao, dia ny fijerena amin'ny fahitalavitra no zavatra tsara indrindra manaraka. Ny fanaovana drafitra hijerena ny lalao lehibe (na lalao / ady / fifanintsanana / hazakazaka) dia fomban-drazana iraisan'ny kolontsaina manerana izao tontolo izao. Raha ny marina, ny hetsika ara-panatanjahantena no mandrafitra ny ankamaroan'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra malaza indrindra.
Ny hetsika ara-panatanjahantena be mpijery indrindra teo amin'ny tantara dia manodidina ny fotoana roa lehibe indrindra amin'ny fanatanjahantena: ny Lalao Olaimpika sy ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA. Fijery roa tena eran-tany izy ireo, fetiben'ny fanatanjahantena roa maharitra izay mankalaza ny tsara indrindra manerana ny planeta. Matetika dia tsy mora ny mahazo atleta avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hifaninana amin'ny fifaninanana iray, fa ny lalao olympika sy ny fiadiana ny amboara eran-tany dia manome izany.
Ireto ny hetsika ara-panatanjahantena 10 be mpijery indrindra teo amin'ny tantara.
Paralimpika fahavaratra Rio 2016
Lalao Olaimpika fahavaratra 2012 any Londres
Lalao Olaimpika fahavaratra 2016 Rio
Mondial FIFA 2018 any Rosia
Lalao Olaimpika fahavaratra 2008 any Beijing
Lalao Olaimpika fahavaratra 1996 Atlanta
Frantsa 1998 FIFA World Cup
Hetsika 20 ambony be mpijery indrindra amin'ny fotoana rehetra 2022
Tombontsoa amin'ny famokarana kely